दसैंको कामना !
बलदेव भट्टराई, (डडेल्धुरा , हाल: कोरिया)
अग्लिने मनका उजाड पाखाहरुमा हरिया रुख रोप्दै मुस्कुराउनु ।
नागबेली मनका धमिला नालाहरुमा पानीले धुँदै मुस्कुराउनु ।।
यसपालिको दसैंमा के दिनु शुभकामना तपाईंहरुलाई अरु त ,
विभाजित हाम्रो देशमा एकताको बलियो पुल बाँध्दै मुस्कुराउनु ।।
समस्या जो हाम्रो, फाल्ने उक्ति मिलोस ।
पछिका पुस्ताले नि मान्ने जुक्ति मिलोस ।
मेरो गोरुको बार्है टक्का भन्नेलाई,यो दसैंमा ,
एक टक्का अरुको नि ठान्ने शक्ति मिलोस !
नपिउने मान्छे म, कहिले काँही पर्दा पिएथें बस ।
ढुंगा भन्थे मेरो मन, एक्लो हुँदा मात्र रोएथें बस ।
एक गति थियो मेरो, भन्थे म- नहार्ने मान्छे हुँ,
शक्ति जो तिम्रो; त्यो मायाको, त्यहीं एक हारेथें बस ।
बढाउँदा पाइला यात्राका एक बिहानी याद आयो ।
पल्टाउँदा पाना जिन्दगीका एक कहाँनी याद आयो ।
जहाँ हामी केही पाइला साथ हिडेंर बिदा भएथें,
धत्! बिर्सुँ भन्यो झन भिंजेको जवानी याद आयो । ।